ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်: Mike Baldassari | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး & Profiles: သူ Mike Baldassari
Mike Baldassari (ရင်းမြစ် - Jonsar စတူဒီယိုများ)
Mike Baldassari သည်ဇာတ်စင်နှင့်ရုပ်ရှင်နှစ်ခုလုံးအတွက်လူသိများပြီးလေးစားဖွယ်ကောင်းသောအလင်းရောင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်သည်။ ငါမကြာသေးမီကသူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်မှုများနှင့်အကြွေးမြောက်မြားစွာအကြောင်းကိုသူနှင့်အတူအသေးစိတ်အင်တာဗျူးလုပ်ဆောင်သွားရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်တော်ဟာတိုနီနဲ့အမ်မီကရွေးချယ်ထားတဲ့အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်လို့ပြောရတာဂုဏ်ယူပါတယ်၊ သူ့အလုပ်တွေကို 25 နိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ "ကဲ့သို့သော Broadway ပြပွဲဒီဇိုင်းအပြင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ (1998 & 2014) အငယ်ဆုံးသောသူ၏သားသမီးနှင့် ပထမနေ့ ငါရုပ်ရှင်များအတွက်ပြဇာတ်အလင်းရောင်ဖန်တီးခဲ့တယ် Ghostbusters (2016 မူကွဲ) ကိုး, ခေတ်၏ရော့ခ်, ရှငျလနျးဆူညံသံနှင့် နီးလ်လူငယ်ပင်စည်ပြပွဲအခြားသူများအကြား။ ကျွန်ုပ်၏ရုပ်မြင်သံကြားဒီဇိုင်းများတွင် Season2ပါဝင်သည် ကျွန်ုပ်၏နောက် Guest ည့်သည် David Letterman ၏မိတ်ဆက်မလိုအပ်ပါ, အ အနီရောင် Live U2 နှင့် U2 ၏ Bruce Springsteen တို့နှင့်အတူ Times Square မှဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု The Rock ၏ထိပ် စွမ်းဆောင်ရည် အဆိုပါယနေ့ညပြရန်ဖြစ်စဉ်များ ယခုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်!များအတွက်ကြိုတင်တိပ်ခွေများအပြင် စနေနေ့ညတိုက်ရိုက် နှင့် ရှေ Meyer နှင့်အတူနှောင်းပိုင်းတွင်ည။ John Mulaney၊ Ray Romano၊ Joe Rogan, Dana Carvey နှင့် Hannibal Buress နှင့် Chris D'Elia တို့အတွက် Netflix အထူးဒီဇိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဂီတလောကတွင် MSG တွင် Phish နှင့်အတူနှစ်သစ်ကူးအကြိုပွဲများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး Neil Young နှင့် Alice အတွက်ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်များစွာကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်မြင်သံကြားဖျော်ဖြေပွဲများပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ မာရိဂျေဘလစ်ဂျ်၊ တိမက်ဂရေး၊ ဆမ်စမစ်နှင့် Garth Brooks ။ ”
Baldassari ကသူသည်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်မည်သို့စတင်ခဲ့သည်ကိုပြောပြခဲ့သည်။ ငါအထက်တန်းကျောင်းတုန်းကငါတီးဝိုင်းများတွင်ကစားခြင်းနှင့်ဒရမ်သမားအဖြစ်ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Parsippany Hills အထက်တန်းကျောင်းတွင်ထူးချွန်သည့်အနုပညာအစီအစဉ်တစ်ခုရှိပြီးမီးအလင်းရောင်အမှားများကိုဖမ်းမိနိုင်သည့်ပြဇာတ်ရုံ၌တတ်နိုင်သမျှအချိန်ဖြုန်းခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Connecticut တက္ကသိုလ်တွင်ပြဇာတ်ရုံကိုဆက်လက်လေ့လာခဲ့ပြီးအကြီးတန်းဖြစ်စဉ် United Scenic Artists 829 အလုပ်သင်အစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုလက်ခံခဲ့ပါသည်။ အဲဒီနောက်ငါပြေးထွက်ပြေး! ကျွန်ုပ်အတွက်ဂီတပညာရှင်မှအလင်းရောင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်အဆင့်သို့တိုးတက်ခြင်းသည်နေ့တိုင်းလိုလိုဂီတနှင့်ပတ်သက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါတီးခတ်သူသို့မဟုတ်ဂစ်တာများကဲ့သို့တေးဂီတတူရိယာများကိုသုံးခြင်းမှ လွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်ဂီတသို့မဟုတ်အခြားပြဇာတ်ရုံအတွေ့အကြုံများကိုအမြင်အာရုံကိုစီစဉ်ရန်ရွေ့လျားမီးများနှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုခြင်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းနာတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းကိုကြည့်သည်။
သူ Mike ကိုသူဘယ်မှတ်မိလောက်အောင်အမှတ်တရမှတ်မိနိုင်တဲ့အထူးပြဇာတ်တွေ၊ "ငါ၏ Broadway ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူတစ် 20 ပေါင်းပေါင်းတစ်နှစ်ကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ၎င်းအတွက် PNGY Eisenhauer နှင့် 1998 တွင်တိုနီဆုအတွက်လျာထားခြင်းခံရသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးနိူးထမှုကို 2014 တွင်ပူးတွဲဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့စလုပ်တုန်းကဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sam Mendes နဲ့ Rob Marshall တို့ကပူးတွဲညွှန်ကြားနေပါတယ်။ (ဒီလူတွေဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာငါတွေးမိတယ်။ ) ငါတို့အဆုံးမှာကမ္ဘာလှည့်ခရီးစဉ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ဘူး, ငါတို့ထုတ်လုပ်မှုထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင့်သူကအစဉ်အဆက်ပြုလိမ့်မည်ဟုသောနောက်ဆက်တွဲထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ။ တ ဦး တည်းပြပွဲနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အခြားအရာကအဲဒါကိုကြောင်းကူညီပေးသည် cabaret-အားလုံးသောအချိန်ကာလ၏ကြီးမားသောအမေရိကန်ဂီတတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ခရီးစဉ်သည်ဘယ်သောအခါမျှပျင်းစရာမရှိခဲ့ပါ။
“ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရော့ခ်မာရှယ်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုသံသယရှိစရာမလိုပါဘူး ကိုး အဲဒီမှာတက်! ငါရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပါသော 14 ဂီတနံပါတ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Dion Beebe နှင့် Rob တို့နှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်သည်။ ထိုတွင်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သည်အချိန်တိုင်း၏အသွင်အပြင်နှင့်အနီးကပ်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ဂီတနံပါတ်များအားလုံးသည်လန်ဒန်ရှိ Shepperton စတူဒီယိုတွင်အသံကွင်း၌ရိုက်ကူးထားသောဘောလုံးကွင်း၏အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ Dale Judy Dench၊ Nicole Kidman၊ Penelope Cruise, Fergie, Kate Hudson နှင့် Marion Cotillard တို့နှင့်အတူ Daniel Day Lewis ၏ ဦး ဆောင် ဦး ရွက်ပြုသည့်အမြင်အာရုံကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ အလွန်ကြီးမားသောဂီတအစီအစဉ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အပြင် ဦး ဆောင်မှုတစ်ခုစီတွင်လည်းသူတို့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်များရှိသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ဂီတနံပါတ်တိုင်းကိုအလွန်ပြဇာတ်ဆန်ဆန်ထွန်းလင်းထားရတယ်။ အဲဒါကြောင့်ရော့ဘ်ကိုကျွန်မကိုခေါ်ဆောင်လာရခြင်းဖြစ်တယ်။ သူဟာဘရော့ဒ်ဝေးဇာတ်စင်ကိုတင်နေသလိုပဲရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်လိုချင်တယ်၊ တူညီသောဘာသာစကား။ ဒါကမမေ့နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံပဲ!”
Baldassari ၏ခရက်ဒစ်များတွင် CBS ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်ပြပွဲဒီဇိုင်းလည်းပါဝင်သည်။ သူကသူဘယ်လို Gig တယ်ဘယ်လိုငါ့ကိုရှင်းပြတယ်။ "၏အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ ရှေ့သို့ CBS လွှ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ နှင့်သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါထွက်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရှိုးပွဲများပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်နှင့်ငါတို့တကယ်ကို Carnegie ခန်းမမှာလုပ်နိုင်သောအရာကိုကန့်သတ်တွန်းအားပေးပါတယ် ဤစီမံကိန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲရင်ဆိုင်ရသောအကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာပြပွဲသည်အမေရိကန်တစ်ဝန်းရှိအခြားနေရာများသို့ထုတ်လွှင့်သောကြောင့်ပြပွဲသည်အခန်းရှိမက်ဒီနစ္စတန်ရိပ်သာလမ်းရှိလူများနှင့်ကင်မရာများကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ Live နှင့်ကင်မရာအတွက်သင့်တော်သောအလင်းချိန်ခွင်လျှာကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်သည်ဗီဒီယိုအင်ဂျင်နီယာ Billy Steinberg နှင့်အလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ငါတို့ပြုလုပ်သောကခုန်မှုသည်ပရိသတ်အတွက်အမြင်အာရုံအလျှော့ပေးမှုမရှိကြောင်းသေချာစေသည်။ ”
သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်အလင်းရောင်သုံးကိရိယာနှင့် software အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရာတွင် Baldassari က“ ဆော့ဖ်ဝဲဘက်မှာအဓိကသွားရမည့်ကိရိယာသည်ငါတို့ရေးဆွဲချက်များနှင့် 3D ပြန်ဆိုချက်များအားလုံးအတွက် Vectorworks ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်နာနှင့် gaffer ကြားရှိစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ကျွန်ုပ်ကောလိပ်တက်နေစဉ်ကတည်းကထွက်ပေါ်လာခဲ့သည့် Lightwright ဖြစ်သည်။ ဒီပရိုဂရမ်နှစ်ခုဟာတွဲဖက်အလုပ်လုပ်နေပြီ။ Vectorworks ၏ 3D ပါဝင်မှုသည်ထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ယခုအလွန်အဖိုးတန်သည့်အထိတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏ Visision အစိတ်အပိုင်း Vision သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D တွင် Light Plot နှင့်နည်းပညာရေးဆွဲခြင်းများကို Vectorworks ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အလွယ်တကူရွေ့လျားနိုင်သည်။ ထို့နောက် CAD ဖိုင်ကို Vision သို့တင်ပို့သည်။ ထိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးတိုင်များကိုတိုက်ရိုက်ဆောက်လုပ်ပြီးစတင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဘဝအလင်းရောင်ဒီဇိုင်း။
“ ယေဘုယျအားဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာဘက်မှာ၊ ငါဟာ LED အရင်းအမြစ်တွေနဲ့အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆီကိုပိုပိုပြီးရွေ့လျားနေပါတယ်။ ငါအမြဲတမ်းအရောင်ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းရည်အပြင်ပရိုဂရမ်မာမှတစ်ဆင့်လှေကားမှတဆင့်လ်တာတစ်ခု၏အာရုံကိုချိန်ညှိရန်ရွေးစရာရှိခြင်းကိုပိုနှစ်သက်သည်။ ငါထင်တယ်အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့စွမ်းအင်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်တဲ့ကိရိယာများကိုဆက်လက်ဖော်ပြရန်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများကိုပိုမိုစိမ်းလန်းသောထုတ်ကုန်များဆီသို့တွန်းပို့ရန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုနှုန်းသည်အရှိန်မြှင့်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းထုတ်လုပ်သူများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုတုန့်ပြန်သောကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ငါသည် LED-based လ်တာ၏အရည်အသွေးတိုးတက်လာဆက်လက်ပြောသည်။
“ ငါအလွန်ကျယ်ပြန့်သောစီမံကိန်းများကိုပြုလုပ်သည့်အခါအလင်းရောင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအများစုအတွက်တစ်ခုတည်းသောကိုက်ညီသောအဖြေတစ်ခုမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြသောကိရိယာများသည်လည်းကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။ သို့သျောလညျး, ငါဟုခေါ်တွင်သောအခါ, ငါသိ၏ ရှေ Meyer နှင့်အတူနှောင်းပိုင်းတွင်ည အဝေးထိန်းကြိုတင်တိပ်ခွေသည်မကြာခဏဆိုသလိုအစီအစဉ်သည် Arri Skypanels နှင့်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါ Netflix ကိုအထူးမီးထွန်းလိုက်ရင် David Letterman လိုပေါ့ အကြှနျုပျ၏နောက် Next ည့်သည်အဘယ်သူမျှမနိဒါန်းလိုအပ်သည် Cyc ကဲ့သို့သော backwall ပါ ၀ င်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Chroma-Q Color Force II ၏ Cyc လ်တာလ်များနှင့်စတင်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်၏ Moving Light Programmer နှင့်အမြဲတမ်းတိုင်ပင်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် ETC Eco-system သို့မဟုတ် GrandMA2၏မူကွဲအချို့တွင်တစ်နေရာရာသို့ဆင်းသက်လေ့ရှိသည်။ စီမံကိန်းတိုင်းအတွက်လုံးဝမသင့်တော်ပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်အလိုအလျောက်ပိုလုပ်လေလေ။
Baldassari သည်များအတွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့သည် NAB ပြရန် ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေကနယူးယောက်ခ်“ The LED Challenge for Film and Television” လို့ခေါ်တဲ့အတွက်အင်တာဗျူးမှာပါ။ သူကရှင်းပြသည်မှာ“ ဒါကကျွန်မကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် NAB ရဲ့အသင်းဝင်ဖြစ်ဖို့ဖိတ်ကြားခံရတာပါ။ “ စက်မှုလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်စလုပ်ကတည်းကဒီကိစ္စကိုအမြဲတမ်းကြားသိခဲ့ရပါတယ်၊ အထူးသဖြင့်လေးစားခံရတဲ့ပညာရှင်တွေပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဒီဇိုင်နာရဲ့ရှုထောင့်ကနေကျွန်မဟောပြောချက်ကိုချဉ်းကပ်လာတာနဲ့အမျှ LEDs တွေရဲ့ပြဇာတ်ရုံနဲ့ရော့ခ်ဂီတမှာသာမကရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းအသုံးဝင်မယ့်အချက်ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုရခဲ့သလဲဆိုတာကိုခေတ္တမျှထိမိလိုက်သည်။ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သော 'crossover' light designers များထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် LEDs များတိုးပွားလာခြင်းကိုယခုအချိန်အထိစောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။ LEDs ကိုသုံးခြင်း၏အားသာချက်များရှိသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုစသဖြင့်၊ ဒါပေမယ့်ငါကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုအချို့ကိုလည်းပြောပြချင်ခဲ့တယ်။ ငါပေါ်လာသည့်ပြproblemsနာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ခဲ့သည့်ပြanနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောသူများအားပြောပြခဲ့သည်။ အဓိကအချက်မှာ LED လ်တာများဆက်ရှိနေရန်ဖြစ်သည်။ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများက၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့စဉ်က၎င်းတွင်တပ်ဆင်ထားသောမီးကြိုးကို အသုံးပြု၍ လာမည့်စိန်ခေါ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများရှိသည်။ ကျနော့်ရဲ့ပရိသတ်ကတော့သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းမှာပြissueနာတစ်ခုရှိရင်စိတ်ထဲအဖြေတစ်ခုရချင်တဲ့ LED ရေကူးကန်ထဲကိုခြေချောင်းတစ်ချောင်းစီလောင်းပေးသူတိုင်းအတွက်ပါ။ ”
Baldassari ကသူ၏လာမည့်စီမံကိန်းများအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြခြင်းဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုနိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ “ အခုအချိန်မှာငါဟာ Hannibel Buress အတွက် Netflix ကိုအထူးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကမိုင်ယာမီမှာရိုက်ခဲ့တယ်။ အခုငါနေ့နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းက Minneapolis မှာကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Chris D'Elia အတွက်နောက်ထပ် Netflix အထူးဒီဇိုင်းကိုလုပ်နေတယ်။ ရုပ်ရှင်ပရောဂျက်တစ်ခုရှိသည်။ choreographer သူငယ်ချင်းကကျွန်ုပ်ကိုလှည့်ပတ်နေသည်ကိုပြရန်ပြောခဲ့သည်။ ပြဇာတ်ရုံမှာကျွန်တော်က Broadway စီးရီးအတွက်အလင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးဒီဇိုင်းပညာရှင်ပါ Residence တွင်ငါတို့လာမယ့်နွေ ဦး ရာသီရောက်စေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် ၎င်းသည်ဘရော့ဒ်ဝေးတွင်ပွဲတော်အမျိုးအစားပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ကန့်သတ်ထားသောအနုပညာရှင်များကိုအနုပညာအမျိုးမျိုးကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်။ ဒီအတိတ်နွေရာသီရဲ့ပထမဆုံးဗားရှင်းဟာအရမ်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ Morrissey, Mel Brooks, Dave Chappelle နှင့် Barry Manilow ကဲ့သို့အနုပညာရှင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ စီးရီးကိုအလုပ်လုပ်ရန်သော့ချက်မှာ Flex-i-Fest ™ဟုခေါ်သောအလင်းရောင်စနစ်ဖြစ်သည်။ ထိုတွင်လုပ်ရပ်တစ်ခုစီ၏ LD နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အနုပညာရှင်တိုင်းကို၎င်းတို့အတွက်ထူးခြားသောအလင်းကွက်ကိုတင်စရာမလိုဘဲပေးနိုင်ခဲ့သည်။ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောရှိုးဝန် - ထွက်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပြောင်းလဲမှုအပြီးတွင်အလင်းရောင်စနစ်သည် Dave Chappelle မှထူးခြားသောအလင်းကွက်မှနှစ်နာရီအတွင်း Barry Manilow's သို့သွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့် PRG နှင့်ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီသည်၎င်းကိုမူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့သည်။ နောက် Broadway ပြဇာတ်ရုံတစ်ခုတွင်လာရှာပါ။ နောက်ရာသီမှာလာမယ့်ရာသီမှာထွက်မယ့်အစီအစဉ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား 2019-10-18
ယခင်: Dell Blue သည် Visienal“ Everything Counts” အစက်ကို Alienware အတွက်ဖန်တီးသည်
နောက်တစ်ခု: Medialooks သည် eSports Giant ESL ကို Video Transport Solution ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်